Fanampiny Cycloastragenol: tombontsoa, ​​dosie, fiarovana & fikarohana
Septambra 29, 2020
Cycloastragenol (CAG) fantatra koa amin'ny hoe T-65 dia tetiteraly voajanahary triterpenoid azo avy amin'ny Astragalus membranaceus fototra. Tamin'ny fotoana voalohany no nahitana azy Astragalus membranaceus nalaina dia novinavinaina ho an'ireo akora mavitrika misy fananana manohitra fahanterana.
Cycloastragenol koa dia azo alaina amin'ny Astragaloside IV amin'ny alàlan'ny hetsika hydrolysis. Astragaloside IV no mpiorina miasa lehibe ao Astragalus membranaceus anana. Na dia mitovy amin'ny rafitra simika aza ny Cycloastragenol sy Astragaloside IV, dia maivana kokoa noho ny lanjan'ny molekiola ny cycloastragenol noho ny Astragaloside IV. Vokatr'izany, Cycloastragenol dia mahomby kokoa noho ny bioavailability avo ary noho izany ny metabolisma cycloastragenol avo. Ny fatran'ny metabolisme cycloastragenol avo dia voamarika ao amin'ny epithelialan'ny tsinay amin'ny alàlan'ny fanaparitahana passive.
Ny ahitra astragalus dia nampiasaina ho fanafody nentim-paharazana sinoa nandritra ny taonjato maro ary ampiasaina koa ankehitriny. Ny zavamaniry astragalus dia nampiasaina noho ny vokany mahasoa ao anatin'izany ny fanoherana ny bakteria, ny anti-inflammatoire ary koa ny fanatsarana ny tsimatimanota.
Ny CAG dia aseho ho toy ny vovoka manohitra ny fahanterana izay mampiroborobo ny asan'ny telomerase anzima sy ny fanasitranana ny ratra. Io no fitambarana lehibe fantatra ankehitriny hampisy telomerase ny olombelona, ​​ka izany dia famenon-kevitra lehibe ho an'ny fampandrosoana bebe kokoa.
Cycloastragenol dia fantatra ho activator telomerase, izay mitana ny anjara asany amin'ny fampitomboana ny halavan'ny telomeres. Telomeres dia satroka miaro izay misy famerenana nukleotide amin'ny faran'ny chromosome. Ireo telomeres ireo dia lasa fohy kokoa isaky ny fizarazaran'ny sela izay miteraka fahatapahan'ny sela sy fahasimbana. Ankoatr'izay, ny telomeres koa dia azo hafoina amin'ny fihenjanana oksidana.
Ity fanafohezana faran'izay telomeres ity dia mifandraika amin'ny fahanterana, fahafatesana ary aretina sasany mifandraika amin'ny ag. Soa ihany, ny anzima telomerase dia afaka mampitombo ny halavan'ireo telomeres ireo.
Na dia tsy misy fandalinana marobe aza hanaporofoana ny fahafahan'ny cycloastragenol manitatra ny androm-piainany, dia fitambarana mampanantena anti-antitra izy io. Voaporofo fa manafoana ireo fambara fahanterana ao anatin'izany ny tsipika sy kentrona tsara. Ny CAG koa dia mety hampihena ny fandrahonana hiteraka fikorontanan'ny fahasimbana toy ny Parkinson's, Alzheimer, ary ny katarakta.
Na eo aza ny maro tombontsoa ara-pahasalamana cycloastragenol, misy ny ahiahy mety hitarika homamiadana na hanafaingana ny homamiadana. Na izany aza, ny fanadihadiana sasany natao tamin'ny lohahevitry ny biby dia mitatitra ny soa azo avy amin'ny cycloastragenol nefa tsy voan'ny homamiadana.
Ny vovoka Cycloastragenol amidy dia mora azo amin'ny Internet ary azo vidiana amin'ireo mpamatsy cycloastragenol malaza.
Na eo aza izany, ny tombontsoa ara-pahasalamana cycloastragenol marobe voalaza fa mbola mpikambana vaovao eo am-panadihadiana izy io. Ankoatr'izay, ny voka-dratsin'ny cycloastragenol dia tsy dia mazava loatra, noho izany dia tokony hampiasaina am-pitandremana.
Inona ny Cycloastragenol?
Cycloastragenol dia fitambaran'ny saponin triterpenoid azo avy amin'ny fakan'ny ahitra Astragalus. Astragalus membranaceus zavamaniry dia nampiasaina tamin'ny fitsaboana sinoa nentim-paharazana (TCM) nandritra ny 2000 taona mahery ary mbola ampiasaina amin'ny fanomanana raokandro.
Ny ahitra astragalus dia fantatra amin'ny fahaizany manatsara ny tsimatimanota, miaro ny velona, ​​manao diuretic ary koa manana fahasalamana hafa fananana toy ny anti-hypersensitivity, antibacterial, anti-fahanterana sy tombontsoa manohitra ny adin-tsaina.
Cycloastragenol mahazatra fantatra amin'ny anarana hoe TA-65 fa nantsoina koa hoe Cyclogalagenin, Cyclogalegenin, Cyclogalegigenin, ary Astramembrangenin. Cycloastragenol fanampin fantatra amin'ny anarana hoe agents anti-anti-age, na izany aza, ny tombontsoa ara-pahasalamana cycloastragenol hafa dia ny fanamafisana ny hery fiarovan'ny vatana, ny anti-inflammatoire ary ny anti-oxidative.
Cycloastragenol sy Astragaloside IV
Ny cycloastragenol sy Astragaloside IV dia mipoitra voajanahary ao amin'ny fitrandrahana zavamaniry astragalus. Astragaloside IV no mpiorina miasa voalohany ao astragalus membranaceus, na izany aza, dia miseho amina isa-minitra ao amin'ny faka. Ny dingan'ny fitrandrahana ireo saponin ireo, cycloastragenol ary astragaloside IV, dia matetika no sarotra noho ny haavon'ny fanadiovana takiana.
While both cycloastragenol sy astragaloside IV dia avy amin'ny ahitra astragalus, cycloastragenol koa dia azo alaina amin'ny astragaloside IV amin'ny alàlan'ny fizotran'ny hydrolisis.
Ireo fitambarana roa ireo dia manana firafitra simika mitovy amin'izany, na izany aza, ny cycloastragenol dia maivana kokoa noho ny lanjan'ny molekiola noho ny astragaloside IV ary azo zahana ihany koa.
Ny fomba fiasan'ny Cycloastragenol
i. Fanentanana Telomerase
Telomeres dia niotrikaototide miverimberina any amin'ny faran'ny chromosome mivantana ary voafatotry ny proteinina maromaro. Telomeres dia manafoana voajanahary isaky ny fizarana sela. Telomerase, fitambarana ribonucleoprotein misy enzim-transcriptase (TERT) mandingana catalytic ary singa RNA telomerase (TERC) dia manitatra telomeres. Koa satria ny anjara asan'ny telomeres dia ny miaro ny chromosome amin'ny fusion sy ny dégradation, matetika ny sela dia manaiky ny telomeres tena fohy ho ADN simba.
Ny fampidirana Cycloastragenol telomerase dia miteraka fanitarana ireo telomeres izay maneho vokatra mahasoa.
II. Manatsara ny metabolisma lipida
Ny lipida dia miasa ho toy ny fivarotana angovo ao amin'ny vatantsika. Na izany aza, ny be loatra amin'ireny lipida ireny dia mety hanimba ny fahasalamantsika.
Cycloastragenol dia mampiroborobo ny metabolisma lipid salama amin'ny alàlan'ny biomarker metabolisma lipida isan-karazany.
Voalohany, amin'ny fatra ambany, ny CAG dia mampihena ny vongan-dranomaso lipidopatopika ao amin'ny adiposita 3T3-L1. Faharoa, rehefa ampiasaina amin'ny doka avo dia manakana ny tsy fitovian'ny 3T3-L1 preadipocytes ny CAG. Ary farany, ny CAG dia afaka miteraka fidiran'ny calcium ao amin'ny preadiposit 3T3-L1.
Koa satria ny calcium avo be intracellular dia afaka manafoana ny tsy fitovizan'ny adipocytes, ny CAG dia mitondra fifandanjana amin'ny metabolisma lipida amin'ny alàlan'ny fanentanana ny fidiran'ny calcium.
III. Hetsika Antioxidant
Ny fihenjanana amin'ny oksidana no fototry ny aretina maro ary koa ny tsy fahatomombanan'ny sela. Ny fihenan-tsakafo oksidatif dia mitranga rehefa misy mihoatra ny radika maimaim-poana ao amin'ny vatana.
Cycloastragenol dia mampiseho toetra manohitra ny oksidia amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fahaiza-manaon'ny antioxidant. Ity hetsika antioxidant ity dia mifandraika amin'ny vondrona hydroxyl hita ao amin'ny CAG.
Ankoatr'izay, ny fihenjanana amin'ny alikaola dia ny antony lehibe indrindra amin'ny fanafohezana telomere, noho izany ny fiarovana ny telomere CAG dia azo avy amin'ny asan'ny antioxidant sy ny activation telomerase.
IV. Hetsika fanoherana ny inflammatoire
Raha ny fivontosana dia fomba voajanahary iadiana amin'ny vatana amin'ny aretina na ny ratra, dia manimba kosa ny mamaivay maharitra. Ny fivontosana maharitra dia mifandray amin'ny aretina maro toy ny pnemonia, diabeta, aretim-po ary aretin-tratra.
Ny vovony Cycloastragenol dia mampiseho toetra manohitra ny inflammatoire. Ny tombontsoa manohitra ny inflammatoire an'ny cycloastragenol dia amin'ny alàlan'ny fomba isan-karazany ao anatin'izany ny fanakanana ny fiparitahan'ny lymphocytes sy ny fanatsarana ny fosforila kinase (AMPK) izay mihetsika AMP-activated AMP.
Soa azo avy amin'ny Cycloastragenol
i.Cycloastragenol sy hery fiarovana
Cycloastragenol dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny tsimatimanota amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fiparitahan'ny lymphocyte T. Ny fahaizan'ny suplement cycloastragenol hampiasana telomerase dia ahafahany manentana ny fanamboarana ADN na dia mitarika fitomboana sy lava aza ny telomere.
II.Cycloastragenol sy Anti-fahanterana
Anti-fahanterana Cycloastragenol fananana no tena mahaliana ny ankamaroan'ny fikarohana ankehitriny. Ny CAG dia naseho fa hampihemotra ny fahanterana amin'ny olombelona ary koa hampihena ny famantarana ny fahanterana toy ny ketrona sy ny tsipika tsara. Ny hetsika fanoherana ny fahanterana amin'ny Cycloastragenol dia azo amin'ny alàlan'ny rafitra efatra samihafa. Ny mekanika fanoherana ny fahanterana amin'ny cycloastragenol dia misy;
Miady amin'ny adin-tsaina ôksidialy
Ny fihenan-tsakafo oksidatif dia mitranga voajanahary rehefa misy ny tsy fitoviana eo amin'ny radika maimaim-poana sy ny antioksida ao amin'ny vatana. Raha tsy voafehy, ny fihenjanana azo avy amin'ny oxidative dia afaka manafaingana ny fizotry ny fahanterana ary mitarika amin'ny toe-javatra maharitra toy ny homamiadana, aretim-po ary diabeta.
Cycloastragenol astragalus nalaina dia fitambarana antioxidant tena tsara ary manatsara ny fahafahan'ny antioksidan misy voajanahary. Izany dia manampy amin'ny fanemorana ny fahanterana ary koa manakana ny fisian'ny aretina mifandraika amin'ny taona.
Cycloastragenol dia miasa ho toy ny activator telomerase
Araka ny voaresaka ao amin'ny fizarana etsy ambony momba ny mekanisma amin'ny asa, ny cycloastragenol dia manampy amin'ny fanitarana telomeres. Izy io dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiantohana ny fitohizan'ny fizarazaran'ny sela ka mampihemotra ny fahanterana. Izy io koa dia manampy amin'ny fitazonana ny taova mety hiasa tsara.
Cycloastragenol dia manome fiarovana amin'ny taratra UV
Rehefa tratry ny hazavan'ny masoandro mandritra ny fotoana maharitra ny olona iray dia mety ho simba ny sela ary vokany tsy mandeha tsara. Izany dia miteraka endrika fahanterana aloha loatra izay antsoina hoe fahanteran'ny sary.
Ny vovony Cycloastragenol dia tonga hamonjy satria naseho mba hiarovana ny hoditra amin'ny vokadratsin'ny taratra UV.
Cycloastragenol dia manakana ny glycation proteinina
Ny glycation dia dingana iray izay ampidiran'ny siramamy toy ny glucose na fructose amin'ny lipida na proteinina. Glycation dia iray amin'ireo biomarker ho an'ny diabeta ary nifandray tamin'ny fahanterana ary koa aretina hafa.
Fanampiny Cycloastragenol manampy amin'ny fisorohana ny fahanterana noho ny glycation amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fananganana glycation vokatra.
III.Ny tombontsoa hafa azo tsaboina amin'ny Cycloastragenol:
Fitsaboana homamiadana Cycloastragenol
Ny mety manasitrana homamiadana cycloastragenol dia aseho amin'ny fahaizany manimba ny sela voan'ny homamiadana, manatsara ny fiarovana ary miaro ny iray amin'ireo fihetsika manimba amin'ny fitsaboana simika.
Amin'ny fanadihadiana ny olona voan'ny homamiadan'ny nono, homamiadana cycloastragenol ny fitsaboana dia naseho tamin'ny fahafahany mampihena ny fahafatesan'ny olona manodidina ny 40%.
Mety hiaro ny fo amin'ny fahavoazana
Cycloastragenol dia mety hanome fiarovana amin'ny tsy fetezan'ny fo.
Tamin'ny fandinihana ny voalavo misy fahasimban'ny fo nateraka, ny fanampiana ny cycloastragenol dia hita fa nanatsara ny tsy fahatomombanan'ny fo tamin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny autophagy ao amin'ny sela myocardial ary koa ny famoretana ny fitenin'ny matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) sy MMP-9.
Tsara Kokoa torimaso
Miorina amin'ny tsikera cycloastragenol dia afaka manatsara ny kalitaon'ny torimaso. Na izany aza, ny fanadihadiana ara-pahasalamana dia takiana mba hanome porofo mivaingana amin'ny fahaizany manatsara ny torimaso.
Mety hanampy amin'ny ady amin'ny famoizam-po
Telomere fohy dia hita ao amin'ireo olona mijaly amin'ny fikorontanan'ny fahaketrahana toy ny olana ara-toe-po sy ny aretina toy ny Alzheimer.
Nandritra ny fandinihana ny totozy tamin'ny fitsapana nilomano an-tery dia nahitana fihenan'ny cycloastragenol notontosaina nandritra ny 7 andro hampihenana ny tsy fahalalan'izy ireo. Naseho izy io mba hampiasana ny telomerase amin'ny neurons ary koa amin'ny sela PC1, izay manazava ny mety ho fanoherana ny fahaketrahana.
Mety hanafaingana ny fanasitranana ny ratra
Ny fanasitranana ny ratra dia olana lehibe amin'ny marary diabeta. Ity fizotran'ny fanasitranana ratra ity dia mitranga amin'ny alàlan'ny hetsika maromaro. Ireto hetsika ireto dia; hetsika mamaivay, fametahana, famerenana amin'ny laoniny ny epithelium, fanarenana ary farany fanaraha-maso ny sela misy. Ireo sela mitana epithelia ireo dia manakiana amin'ny fanasitranana ny ratra diabeta.
Naseho izany fa misy fiantraikany ratsy amin'ny fanasitranana ny ratra ny fahasimban'ny telomere. Io no misy ny vovo-cycloastragenol hidirana hanamboarana telomere fohy ary koa hanatsara ny fiparitahan'ny sela sy ny fivezivezena. Io indray dia manampy amin'ny fanamboarana ratra haingana.
Manatsara ny fahasalaman'ny volo
Ny tsikera Cycloastragenol avy amin'ny mpampiasa manokana dia mampiseho fa ny cycloastragenol dia mety hanampy amin'ny fisorohana ny fihenan'ny volo, hampiroborobo ny fitomboan'ny volo ary hanatsara ny lokon'ny volo.
Tombony azo avy amin'ny fitrandrahana cycloastragenol astragalus bebe kokoa dia;
Manolotra hetsika fanoherana ny viralin'ny sela CD4 + olombelona.
Mampitombo ny angovo.
Manatsara ny fahasalaman'ny hoditra.
Mety hanatsara ny fahitana.
Ny fatra mahazatra an'ny Cycloastragenol
Ny fitsipika dosia cycloastragenol dia manodidina ny 10 mg isan'andro. Na izany aza, satria vaovao io fanampin ny fatra azy dia miankina betsaka amin'ny fampiasana, taona ary ny aretina.
Ity fatra cycloastragenol mahazatra ity dia tokony hampitomboina amin'ny zokiolona mihoatra ny 60 taona hahatratrarana elongation telomere ampy ary hampihena ny dingan'ny fahanterana.
Milamina ve ny Cycloastragenol?
Ny vovo-tany cycloastragenol dia heverina ho azo antoka amin'ny faritry ny fatra sasany. Na izany aza, satria vaovao io fanampin ny mety ho voka-dratsin'ny cycloastragenol dia mbola tsy fantatra.
Ny tsikera vitsivitsy amin'ny cycloastragenol momba ireo tombony azo avy amin'ny cycloastragenol dia tsy ampy hanamafisana ny fampiasana azy io.
Ankoatr'izay, misy ny ahiahy fa ny famenonan'ny cycloastragenol dia mety hanafaingana ny homamiadana amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny fivontosana. Ity dia tombantombana teorika miorina amin'ny zava-misy fa ny cycloastragenol tena fomba fiasa dia amin'ny alàlan'ny elongation telomere. Noheverina fa hanatsara ny fitomboan'ny sela homamiadana io.
Koa ilaina ny tsy hanomezana cycloastragenol ny mararin'ny homamiadana mandra-pahatongan'ny angona azo antoka momba an'io tombantombana io ary koa mba hisorohana ny poizina cycloastragenol tsy fantatra.
Aiza no ahazoantsika Cycloastragenol tsara indrindra?
Eny ary, vovony cycloastragenol amidy mora azo amin'ny Internet sy amin'ny fivarotana sakafo mahavelona isan-karazany. Na izany aza, mikaroha mandrakariva momba ny vovoka cycloastragenol amidy amin'ny mpamatsy cycloastragenol ekena sy azo antoka hahazoana antoka fa hahazo cycloastragenol voadio tanteraka ianao.
Fikarohana bebe kokoa
Ny vovony Cycloastragenol dia naseho fa manana vokatra mahasoa maro ary bebe kokoa noho izany toetra cycloastragenol anti-antitra. Ny fampidirana Cycloastragenol telomerase no fomba fiasa lehibe izay mampitombo ny telomere. Ireo dia naseho tamin'ny maodely biby maro ary koa vitsivitsy invitro fianarana.
Ny fitsapana ara-pahasalamana amin'ny cycloastragenol astragalus dia mipoitra amin'ny fanitarana telomere dia vitsy dia vitsy ary noho izany dia ilaina ny fandalinana bebe kokoa hanome porofo mivaingana.
Ny voka-dratsin'ny TA-65 amin'ny fanamafisana ny tsy fihanaky ny aretim-po dia tsy dia manaka-penitra satria misy fanadihadiana voafetra ihany hanohanana ity hetsika TA-65 ity.
Ny fandalinana ny metabolisma ny cycloastragenol amin'ny antsipiriany dia hanatsara ny angon-drakitra misy ary koa hampiharihary ny poizina cycloastragenol izay mety hitranga noho ny fanangonana be loatra.
Fandinihana fanampiny hanombanana ny fahombiazan'ny fanampiana cycloastragenol amin'ny tombo-tsoa voafaritra. Ny vokadratsy cycloastragenol dia mbola tsy fantatra. Noho izany, ny fikarohana dia tokony hitarika amin'ny famaritana izay azo atao voka-dratsin'ny cycloastragenol ary koa ny fifandraisana amin'ny fanafody hafa.
Amin'ny fahazoana ny tombontsoa ara-pahasalamana cycloastragenol, dia hanampy amin'ny fizahana ireo rafitra ifotoran'ireny hetsika CAG ireny.
Ho fanampin'izany, ny fatra cycloastragenol mety dia mitaky fandalinana bebe kokoa hanombanana ny doka atolotra ho an'ny sokajin-taona samihafa. Ny mpamatsy cycloastragenol samihafa dia nanolotra doka samihafa izay tokony hampifanarahana amin'ny alàlan'ny fikarohana.
Yuan Yao sy Maria Luz Fernandez (2017). "Fiantraikany mahasoa avy amin'ny activator Telomerase (TA-65) hiadiana amin'ny aretina mitaiza". EC Nutr 6.5: 176-183.
Wang, J., Wu, M.-L., Cao, S.-P., Cai, H., Zhao, Z.-M., & Song, Y.-H. (2018). Cycloastragenol dia manatsara ny fahasimban'ny fo amin'ny fanandramana amin'ny voalavo amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny autophagy myocardial amin'ny alàlan'ny fanakanana ny famantarana AKT1-RPS6KB1. Biomedicine & Pharmacotherapy, 107, 1074-1081. doi: 10.1016 / j.biopha.2018.08.016
Sun, C., Jiang, M., Zhang, L., Yang, J., Zhang, G., Du, B.,… Yao, J. (2017). Cycloastragenol dia manelanelana ny fampahavitrihana sy ny fihenan'ny fihenan'ny modely fampidirana lymphocyte totozy concanavalin A. Immunopharmacology sy Immunotoxicology, 39 (3), 131–139. doi: 10.1080 / 08923973.2017.1300170.
Ip F, C, F, Ng Y, P, An H, J, Dai Y, Pang H, H, Hu Y, Q, Chin A, C, Harley C, B, Wong Y, H, Ip N, Y: Cycloastragenol dia mpikatroka telomerase matanjaka ao amin'ny sela neuronal: misy fiantraikany amin'ny fitantanana fahaketrahana. Neurosignals 2014; 22: 52-63. doi: 10.1159 / 000365290.
Yu, Yongjie & Zhou, Limin & Yang, Yajun & Liu, Yuyu. (2018). Cycloastragenol: mpilatsaka hofidina vaovao mahaliana ho an'ny aretina mifandraika amin'ny taona ((Famerenana). Fitsaboana fanandramana sy fitsaboana. 16. 10.3892 / etm.2018.6501.
CYCLOASTRAGENOL POWDER (78574-94-4)
1. Overview Overview
2.Inona no atao hoe Cycloastragenol?
3.Ny mekanisma fiasan'ny Cycloastragenol
4.Ny tombotsoan'ny Cycloastragenol
5.Ny fatra mahazatra an'ny Cycloastragenol
6. Azo antoka ve ny Cycloastragenol?
7.Aiza no ahafahantsika mahazo Cycloastragenol tsara indrindra?
8. fikarohana bebe kokoa